Siyaasadda RMA - Staba Electric Co., Ltd.
Loogu talagalay otomaatiga
Wararka Gawaarida Staba
Soo celi Ogolaanshaha Badeecada
Habka Sheegashada Ciladaysan
Shirkadda Staba Electric Co., Ltd. (oo loo soo gaabiyo Staba) alaabooyinka waxaa loo damaanad qaaday inay ka xoroobaan cilladaha ku jira maaddada iyo shaqaynta iyadoo la adeegsanayo inta lagu jiro muddada damaanadda. Waajibaadka damaanad qaadka ee alaabooyinka la habeeyay waxaa xukumaya qandaraasyo gooni ah oo aan lagu daboolin dukumintigan.
Muddada Dammaanadda: Guud ahaan, Staba waxay bixisaa 24 bilood oo damaanad ah tan iyo taariikhda rarka. Haddii muddada damaanad qaadka ah ee ku jirta heshiiska ama qaansheegtu ay ka duwan tahay, heshiiska qandaraaska ama qaansheegta ayaa adkaanaya.
Staba Masuuliyad: Mas'uuliyada kaliya ee Staba ee damaanad qaadka waxay ku egtahay ama hagaajinta cilladaha iyadoo la adeegsanayo qaybo cusub ama dib loo hagaajiyay, ama bedelida alaabada cilladaysan ee ay soo celiyeen iibsadayaasha tooska ah. Staba waxay xaq u leedahay inay u isticmaasho qaybaha beddelka aaladda dhinac saddexaad ama qaybaha aan laga heli karin alaab-qeybiyeyaasha asalka ah.
Ka reebitaanka damaanad: Staba ma qaado wax masuuliyad ah iyada oo ay ugu wacan tahay duruufaha soo socda, taas oo damaanadku uu noqonayo mid madhan oo uu joogsanayo inuu dhaqan galo. 1. Badeecada waxaa lagu ogaadey inay cilladaysan tahay kadib markii mudadii damaanadku ka dhamaatay. 2. Shayga waxaa loo isticmaalay si xun u adeegsi, xadgudub, dayacaad, shil, faragelin, badalid, ama dayactir aan la fasaxin, ha ahaato shil ama sababo kale. Xaaladaha noocaas ah waxaa go'aamin doona Staba kaligeed iyo caqligal aan xaddidaneyn. 3. Badeecada ayaa waxyeello u geysatay musiibooyin ama xaalado aad u daran, ha ahaato mid dabiici ah ama mid dad, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn daad, dab, danab, ama khalkhal ku yimaadda korantada. 4. Nambarka taxan ee badeecada waa laga saaray, waa la beddelay, ama waa la xumeeyey. 5. Damaanad-qaadku ma daboolayo waxyeelada is-qurxinta, iyo waxyeelada ka dhacday intii rarku socday.
Dammaanad Dheeraad ah: Staba waxay bixisaa damaanad dheeri ah oo laga iibsan karo wakiilkeena iibka marka aad amarka bixiso. Kharashka iibinta damaanad qaadka la kordhiyay waa koror, iyadoo ku saleysan qiimaha iibka badeecada.
Si aan uga caawinno macaamilka inuu dib u bilaabo hawlgalkiisii ​​caadiga ahaa sida ugu dhakhsaha badan ugana fogaado kharashka ku baxa aaladaha aan run ahaantii waxyeello gaarin, waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawinno cilladbixinta fog oo aan raadino hab kasta oo suurtagal ah oo lagu hagaajiyo qalabka iyada oo aan loo baahnayn waqti iyo kharash aan loo baahnayn. ee soo celinta qalabka dayactirka. Macaamilku wuxuu sheeganayaa dhibaato, iyo inuu la xiriiro wakiilka iibka ee Staba ama taageero farsamo adoo siinaya sharraxaadda dhibaatada oo faahfaahsan ereyo, sawirro, iyo / ama fiidiyowyo. Staba waxay sameysaa dadaalada ugu fiican ee cilad bixinta fog.
Staba kaliya waxay aqbashaa soo celinta dadka toos wax uga iibsada. Haddii aad dhibaato kala kulanto badeecadeena fadlan ku laabo meeshii aad wax ka iibsatay.
Lambarka RMA: kahor intaadan soocelinin alaabada cilladaysan, macaamilku waa inuu laxiriiraa wakiilka iibkeena ee foomka RMA oo leh lambarka RMA ee idman, oo buuxi oo dib ugu dir wakiilka iibka ama info@stabamotor.com. Ogsoonow in lambarka RMA ay tahay in lagu muujiyo banaanka dhammaan baakadaha la soo celiyay. Staba way diidi kartaa inay bixiso dayactirka ama beddelka sheyga iyada oo aan lahayn RMA oo ay ku celiso badeecada Macaamiilka xamuulka qaada.
Dhamaad: RMA waxay shaqeyneysaa soddon (30) maalmood kalandarka kadib markii ay soo saartay Staba. Macaamiisha waa inay ku soo celiyaan badeecada lagu sharaxay RMA soddon (30) maalmood gudahood ama RMA cusub ayaa loo baahan doonaa.
Shuruudaha Xidhmada: Dhammaan alaabooyinka la soo celiyey waa in si habboon loo xirxiraa si looga hortago waxyeelada maraakiibta.
Go'aaminta Xaaladda Dammaanadda: Marka badeecada la helo, Staba ayaa go'aamisa xaaladda damaanad qaadka iyadoo la hubinayo lambarrada taxanaha ah lana baarayo waxyaabaha. Shayga dammaanad qaadka ah waa in la dayactiro ama la beddelo iyada oo aan lala xiriirin macaamiisha. Haddii shey aan damaanad aheyn u baahan yahay dayactir macmiilka waxaa loo diraa foomka Qiyaasta Lacagta oo ay dib u eegi karaan isla markaana saxiixi karaan haddii la aqbali karo. Waxyaabaha aan damaanad qaadka ahayn lama dayactiri doono haddii uusan macaamilku ka haysan oggolaansho qoraal ah. Haddii shay loo arko inuu yahay mid aan dib loo hagaajin karin macaamilka waa lala xiriiray oo wuxuu ikhtiyaar u leeyahay (1) in alaabta la soo celiyo ama (2) in badeecada la tirtiro.
Dayactirka Khidmadda: Shayga dammaanad qaadka ah waa inuu lacag la'aan ku dayactiraa. Shayga aan dammaanad qaadka ahayn waa inuu mas'uul ka ahaadaa khidmadaha qalabka iyo hagaajinta khidmadaha haddii ay khuseeyaan.
Lacagta Xamuulka: haddii ay dhacdo dammaanad qaad, Macaamiilku wuxuu bixin doonaa xamuulka soo galaya alaabada la soo celiyey iyo Staba ayaa bixin doonta xamuulka dibedda ee alaabada la cusboonaysiiyay ama la beddelay ee Macaamiilka ah; haddii ay dhacdo dammaanad-qaadasho, macaamilku waa inuu bixiyaa kharashka alaab-dhoofinta iyo dibedda labadaba.
Qalabka dayactirka ama beddelka ah ayaa la damaanad qaadi doonaa inta ka hartay xilligii dammaanadda ee asalka ahaa ama sagaashan (90) maalmood, hadba kii dheer. Siyaasadda waxaa lagu beddeli karaa go’aanka Staba keligeed, waqti kasta, iyada oo aan ogeysiis hore la helin.
Wixii weydiimo ah, su'aalo ama amaano ah, fadlan wac: 0086-137 9445 5099 ama buuxi foomka soo socda
Mashiinka, Nadiifiye Vacuum, Mashiinka aan cadayan, BLDC Baabuur, Mashiinka DC-ga ee aan burushka lahayn, BLDC Fan Motor, weydiin for pricelist
Maya 87, Wadada 4aad ee Dongfu, Magaalada Dongfeng, 528425, Zhongshan, Guangdong, Shiinaha.
NAGU SOO DHAWOOW